Ukungawini emidlalweni edlule akusho ukulahla amaphuzu - Kekana | isiZulu
Ukungawini emidlalweni edlule akusho ukulahla amaphuzu - Kekana
UKekana uqokwe njengokaputeni omusha we-Sundowns
UKekana noNxumalo eqenjini likaMashaba
UKekana angathola ithuba emdlalweni neWits
Johannesburg - Ukaputeni weMamelodi Sundowns uHlompho Kekana uthi abadumele kangako ngokungawatholi wonke amaphuzu ngeledlule bedlala neFree State Stars neSuperSport United.
ISundowns eqhwakele esicongweni se-Absa idlale ngokulingana kuyona yomibili le midlalo, nokunikeze i-Orlando Pirates ithuba lokuba iyilandele ngamaphuzu amane, ngemuva kokuba yona ishaye ngo-4-2 iChippa United eNelson Mandela Bay Stadium ngeSonto.
Emdlalweni olandelayo iSundowns izodlala namaZulu eKing Zwelithini Stadium ngo-18:00 ngoLwesihlanu ebusuku, kanti iBhakabhaka elisendaweni yesibili lona lizobhekana nezimbangi zalo ezinkulu iKaizer Chiefs, esendaweni yesithathu, eFNB Stadium ngoMgqibelo ngo-15:30.
OLUNYE UDABA: Ubonge abalandeli uPienaar esethi khumu ebholeni
IDowns yashaywa wuSuthu emlenzeni wokuqala emdlalweni owawuseLucas Moripe Stadium.
IDowns isawine imidlalo engu-8 ekuhambeni, nemine kuphela ekhaya.
“Yebo, asiwatholanga wonke amaphuzu emidlalweni emibili edlule sibhekene neSuperSport kanye neFree State Stars, lokhu asikuthathi njengokulahla amaphuzu kodwa sengeze kwesinawo.
"Siyajabula ngoba asihlulwanga. Iphuzi nephuzu libalulekile embangweni wesicoco seligi.”